Xukuumadda Mustafe Cagjar Oo Madax-furasho Kusii Deynaysa Dhallinyarii Reer Jigjiga - Jigjiga Online
HomeSomalidaXukuumadda Mustafe Cagjar Oo Madax-furasho Kusii Deynaysa Dhallinyarii Reer Jigjiga
Godey (JigjigaOnline) – Xukuumadda Dawladda Deegaanka Soomaalida ayaa shuruudo madax-furasho ah ku xidhay sii deynta dhallinyaro ay tiradoodu ka badan tahay 600, kuwaas oo laga ururiyey xaafadaha magaalada Jigjiga.
Dhallinyaradan oo si aan kala sooc lahayn looga raafay Jigjiga, ayaa la geeyey magaalada Godey iyadoo aan la kala saarin kuwii lagu eedaynayey inay ka mid yihiin kooxaha rabshooleyaasha ah iyo kuwii lagu gefay.
Sida ay JigjigaOnline u xaqiijiyeen ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay, xukuumadda Mustafe Muxumed Cumar ayaa waxay u dirtay magaalada Godey maamullada Qabaleeyada Jigjiga, si loo kala saaro kuwa dembiyada lagu tuhunsan yahay iyo kuwa nadiifta ah ee iyagoo waxbarasho ka yimid amaba goobahoodii shaqada laga qafaashay suuqa.
Mustafoow, Jigjiga Way Guuxaysaa!
Ilo-wareedyadu waxay intaa ku dareen, in waalidiinta dhalay carruurta dembiga lagu waayey ay bixiyaan lacago madax-furasho ah oo ay ugu yeedheen ‘Dammaanad’ oo aan dib loogu celin doonin waalidiinta.
Lacagtan madax-furashada ah ayaa loo sheegay waalidiinta, in haddii ay bixin waayaan aan carruurtooda la siin deyn doonin.
Warku waxa uu intaa ku daray, in waalid kasta si gaar ah looga qaadayo lacagta, ka bixin waayana ilmihiisa dib loogu celinayo halkii uu ku xidhnaa.
Warbaahinta JigjigaOnline oo isku dayday inay arrintan wax ka weydiiso laamaha ammaanka ayaanay u suurtogelin, hase yeeshee qaar ka mid ah waalidiinta oo nala soo xidhiidhay ayaa xaqiijiyey in lacagta madax-furashada ah lagu xidhay siideynta carruurtooda.